राजा बिरेन्द्र: भ्रम र यथार्थ - Jagaran Post
Home/पत्रपत्रिकाबाट/राजा बिरेन्द्र: भ्रम र यथार्थ
पत्रपत्रिकाबाटविचार / दृष्‍टिकोणविशेषव्यक्ति बिशेष
२०५८ जेठ १९ गते राति राजदरबारभित्रै हत्याकाण्ड भएको खबर सुनेपछि भोलिपल्ट हजारौँ जनता सडकमा आए। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यलगायत राजपरिवारका आठजना सदस्य एकै ठाउँमा मारिएको सो घटना सम्झिँदा आज पनि हामीलाई पीडा हुन्छ।
राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको खबर केही घन्टामै संसारभरि फैलियो । करोडौँ नेपाली स्तब्ध भए । धेरै विदेशीले पनि हार्दिक समवेदना प्रकट गरे । कैँयन् राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता, सरकार प्रमुख, कूटनीतिज्ञ, विद्वान–विदुषीले गहिरो दुःख व्यक्त गरे।
राजा वीरेन्द्र भन्थे, ‘जनताले तिरेको करबाट हाम्रो खर्च चल्छ । जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन।’”
यस्तै चीनका राष्ट्रपति लि. स्यान न्यान, फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वा मितेराँ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयुम र युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल जोेसेफ बज्र टिटोले राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने राजा वीरेन्द्रले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जापान, चीन, भारतलगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्ररी परिचित गराए।
महेन्द्र राजमार्गजस्तै चीन र भारतसमेत जोड्ने चारपाँच वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग बन्न सकून् भन्ने इच्छा थियो, तर महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर–कञ्चनपुर खण्ड पूरा हुन नै अठार वर्ष ढिलो भयो। भारतको राजनीतिक दबाबका कारण पनि द्रुतगतिमा विकास हुन सकेन। तर श्री ५ वीरेन्द्रको शासनकालमा जति प्रगति भयो, त्यसको उचित मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ।
सरल स्वभावका थिए, राजा वीरेन्द्र। छलकपट नजान्ने र विकासमा लाग्नेहरूलाई प्रेरणा दिने उनको स्वभाव थियो । उनलाई भेटेपछि आलोचकहरू पनि प्रशंसा गर्दै फर्किन्थे । उनको बालसुलभ मुस्कानमा जादु थियो । सधैँ प्रसन्न चित्त देखिन्थे उनी।
यस्ता अनेक रोचक प्रसंग छन्, उनको जीवनमा । वीरगञ्जमा राजा वीरेन्द्र र महारानी ऐश्वर्य साधारण पोसाकमा रिक्सा चढेर सहर घुमेछन् साँझपख । राजारानीलाई चिन्न गाह्रो थियो, झमक्क साँझमा । रिक्सावालालाई उनले धेरै कुरा सोेधेछन् । उसले भनेछ, “अञ्चलाधीश, सिडिओ, पुलिसको हाकिम, भन्सार हाकिम, मालपोत, भूमिसुधार सबैतिर घुस खान्छ दाइ । राजाले जेल हाल्दिए पनि हुन्थ्यो यस्ता मान्छेलाई । राजा आउँदा केके भनेर उनलाई ढाँट्छन् । अरू बेला जनतालाई ठग्छन्।”
त्यसपछि भ्रष्टाचारबारे छानबिन गराउँदै उनले केही कर्मचारी र प्रशासकहरूलाई कडा निगरानीमा राखेको र कतिपयलाई नसिहत दिएको कुरा वीरगञ्जका पुराना पत्रकार गोपाल गिरीले बताएका थिए।
कलेजमा पढ्ने केही विद्यार्थीले पंक्तिकारसँग सोध्ने गर्छन्, “२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्या हुँदा हामी बालक नै थियौँ। तपाईंहरूले राजा वीरेन्द्रका बारेमा बेलाबखत प्रकाशित गरेका लेखमार्फत हामीले धेरै कुरा बुझ्न पाएका छौँ । तर नेपालको इतिहास, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको दरबार हत्याकाण्डलगायतका विषयलाई अरू स्पष्ट गर्दै लेख्न मिल्दैन?”
आफूलाई जनवादी, लोकतन्त्रवादी वा गणन्त्रवादी भन्नेहरूले राजा वीरेन्द्रको जीवनशैलीबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, संस्कार, सभ्यता, शिष्टाचार तथा मानवीय जीवनप्रतिको विशिष्ट दृष्टिकोण राजा वीरेन्द्रको जीवनका हरेक पलमा व्यवहारसमेत देखियो । यसबाट राजनीतिक व्यक्तिहरूले मात्र होइन, आफ्नो व्यक्तित्व उठाउन चाहने र राष्ट्रको उत्थानमा समर्पित हुन चाहनेले उनको जीवनबाट धेरै शिक्षा लिन सक्छन्।
२००२ पुस १४ गते जन्मिएका राजा वीरेन्द्र नवाैं महिनामा जन्मेका थिए भने उनको जीवनको अन्तिम दिन जेठ १९ मा पनि अन्त्यमा ‘नौ’ अंक नै आउँछ। त्यस्तै उनको जन्म, विवाह र स्वर्गारोहण शुक्रबार नै भएको थियो । यसलाई पनि एउटा अनौठो संयोग मान्नुपर्छ।
घुम्दैफिर्दै फेरि जेठ १९ ले फेरि नेटो काटिसकेको छ। इतिहासको एउटा कालो दिन। राजा वीरेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि नेपालबाट स्थायी शान्ति र एक किसिमको खुसी हराउँदै गएको धेरैको बुझाइ छ। वीरेन्द्रको शासनकाल प्रगति, शान्ति र समृद्धिको यात्रातर्फ अग्रसर थियो । बुद्धजस्ता शान्तिप्रिय राजा वीरेन्द्रको स्वर्गारोहण भएको सोह्र वर्षपछि पनि हामी उनलाई सम्झिरहेका छौँ। र, सम्झिरहनेछौँ सधैँ सधैँ।
(नागरिकन्यूज डट कम बाट)
को हुन मनकारी ज्याक मा? पढ्नुहोस उनको संघर्षपूर्ण सफलताको कथा
२०७७ बैशाख १५, सोमबार ०२:३९ गते
महाभारतमा उल्लेख छ: मान्छेले पुत्रमोहमा राज्यको भविष्य बिगार्नु हुँदैन
२०७७ जेष्ठ ३०, शुक्रबार ०८:०५ गते